विचलित प्रतिपक्ष र अलमलिएको सरकार - विदुर खड्का
नेपाली कांग्रेसले अब नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने कुरालाई पार्टीको प्रमुख नाराका रूपमा उठाउने भएको छ । महामन्त्री शशांक कोइराला यसै भन्नुहुन्छ । २०७४ मंसिरको चुनावमा दुई ठूला वामपन्थी दलबीच संयुक्त मोर्चा बनी अभूतपूर्व नतिजा हासिल गरेपछि कांग्रेसको राजनीतिमा ग्रहण लाग्यो । वाम सरकार चुनौतीका पहाडहरू काँधमा राखेर समृद्धिको यात्रामा ठसठसी कनेर उकालो चढ्दै छ । जनताले गरेको अपेक्षा पूरा नभएका कारण सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ । तर, जनताले यो समय सबैभन्दा बढी आशा पनि यही पार्टी र सरकारबाट गरिरहेको छ । सरकार गर्न चाहन्छ, तर अलमलिएको छ भनेर जनताले बुझेका छन् । यसमा सरकारको सुझबुझको आवश्यकता देखिन्छ । न्यायपालिका सरकारको प्रतिपक्षीजस्तो देखिएको छ । कर्मचारीतन्त्र सरकारका कामकारबाहीलाई अटेर गरिरहेको छ । संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय निकायलाई सजिलो पारिदिने कानुन बनाउन ढिलो भएका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकार अलमलिएका छन् । तर पनि सरकार यी सबै काम शीघ्र होस् भन्ने कुरामा गम्भीरता साथ लागेकै देखिन्छ । यसले पनि जनता यो पार्टी र सरकारप्रति अझै आशावादी छ । तर, यही सरकारको अलमललाई आधार बनाएर नेपाली कांग्रेस आफ्नो बिग्रिएको राजनीतिक अवस्था सुधार्न चाहन्छ ।
सरकार अकर्मण्यतामा फसेको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेस सरकारका कामकारबाहीमा मौनप्रायः देखिन्छ । सरकारका नराम्रा कामहरूमा आलोचना गर्नुको साटो ताली बजाइरहेको छ । हुन त चुनाव सम्पन्न गरेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले हार बेहोरेर सरकारबाट बाहिरिने अवस्था आएपछि हुनेनहुने योजनाहरू हालेर पछि आउने सरकारले १० वर्षमा पनि अरू नयाँ योजना हाल्न नमिल्ने गरी नाकाबन्दी गरिदिएको छ । त्यो सम्हाल्दा सम्हाल्दै ओली सरकारले जनअपेक्षाअनुसारको काम गर्न भ्याएको छैन । जसका कारण सरकारले कामै गर्न नसकेको जस्तो देखिएको छ । बीपीको आफ्नै ढंगको विचार र राष्ट्रियताप्रति उनको इमानमा कुनै प्रश्न छैन । तर, उनको भरोसा नेपाली जनताभन्दा बढी भारतीय नेताहरूप्रति नै थियो । भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिएर जेलनेल खाएका तथा समकालीन भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका नेता उनका समकक्षी रहनुले पनि उनलाई उता धेरै भरोसा गर्ने बनाइदिएको हुन सक्छ । राजासँगको टक्करमा तिनै भारतीय नेताले बीपीको साथ दिएनन् । उनको प्रभाव र व्यक्तित्वकै कारण अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले आफ्नो राजनीति टिकाएको छ । बीपीकै व्यक्तित्वमा जोडिएर कोइरालाहरूको अविच्छिन्न वंशानुक्रम नेतृत्वमा कांग्रेसको राजनीति चलिरहेको छ । सुशील कोइरालाको मृत्युपछि कांग्रेसमा कोइराला वंशको बिरासत धान्न सक्ने व्यक्तित्व कुनै कोइरालाले बनाउन सकेनन् । गिरिजाप्रसादकी छोरी सुजाता बेढंगे शैली र विवादास्पद हर्कतका कारण पार्टीभित्रै स्थापित हुन सकेकी छैनन् । शेखर र शशांक कोइरालाहरूको उचाइले हिजो गिरिजा र सुशीललाई टक्कर दिने देउवा, पौडेल, गच्छदार र सिटौलाहरूको व्यक्तित्वलाई टक्कर दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसै पनि नेपाली कांग्रेसका धरै स्थापित नेता विलासी जीवनशैली, भ्रष्टाचार र अत्यधिक रक्सीसेवनका कारण राजनीतिबाट पलायनको अवस्थामा छन् । चन्द्र भण्डारी, विश्वप्रकाश, रमेश लेखक, गगन थापाजस्ता केही सीमित युवा नेताहरू कांग्रेसलाई बीपीको कभरमा अझै बौराउन प्रयासरत देखिन्छन् । कहिले देउवा वा पौडेललाई भिडाएर त कहिले कोइराला परिवारबाट नेता छानेर पार्टीलाई उभ्याउने कोसिस गरेको देखिन्छ । गगन थापाको मिडियाबाजीलाई हेरेर कांग्रेसप्रति क्रेज राख्ने नयाँ पुस्ताका युवाहरू उनले पछिल्लो समय घैंटेजस्ता अपराधीका पक्षमा खुलेर गरेको वक्तव्यबाजीका कारण निराश भएका छन् । यही सत्यलाई बुझेका कांग्रेसका केही नेता पार्टीलाई कसरी कुन ढंगले नयाँ बनाउने र कुन नाराले जनताको दिमाग भुट्ने भनेर भरपर्दो नाराको खोजीमा रहेका देखिन्छन् । यही सिलसिलामा कमल थापाले परित्याग गरेको हिन्दू राज्यको धार्मिक मागलाई टपक्क टिपेर बोकेर हिँडेको छ, कांग्रेस । जुन नारालाई २०७० सालको चुनावमा प्रयोग गरेर थापाले २५ सिट हासिल गरे, त्यही नाराले २०७४ सालको चुनावमा उसलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने स्थितिमा पु¥याइदियो । राष्ट्रिय पार्टीसम्म बन्न सकेनन् । कांग्रेस यसैलाई रछ्यानबाट टिपेर टाउकोमा पहिरिँदै छ ।
अहिले यही हिन्दू राज्यको नारालाई बोकेर नेपाली कांग्रेस दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग भिड्न खोज्दै छ । यसले कांग्रेसलाई कहाँ पु¥याउला त ?
भारतमा हिन्दू अतिवादी पार्टी भाजपाले शासन गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि त्यसको प्रतिछायाका रूपमा हिन्दूत्वको नारा उचालेर समाजलाई धार्मिक अतिवादको दिशामा धकेल्ने दुस्साहस त हुँदै छैन भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । यसो हो भने सबैभन्दा पहिला यसले कांग्रेसलाई नै सिध्याइदिनेछ । किनकि, मध्ययुगमा असफल सिद्ध भइसकेको धार्मिक अतिवाद अब संसारमा कुनै पनि कलेवरमा टिक्न सक्दैन । भारतमा मोदीराज हिन्दूत्व वा कुनै धार्मिक कलेवरमा आएको होइन । भारतका करोडौं मुसलमान, सिख र इसाईहरूले भारतलाई हिन्दू राज्य बनाउन भाजपालाई भोट हालेका होइनन् । यो सत्य कांग्रेस सम्झन चाहँदैन । किनकि, उससँग अहिले अरू कुनै नारा नै छैन ।
राजाको सलबलाहट, राप्रपाहरूको एकता र कांग्रेसको हिन्दूत्वको आवरणमा राजतन्त्रको वकालतले प्रतिक्रियावादीहरूको मोर्चा ढिलै भए पनि बन्ने देखिएको छ । समाजले अग्रगामी परिवर्तन खोज्छ, पछाडि फर्किंदैन भन्ने सत्य कांग्रेसले बुझ्न जरुरी छ ।
बीपीको विचारलाई व्यवहारमा उतार्ने ल्याकत कांग्रेसीहरूमा अब रहेन । बीपीको समाजवाद भन्न जानेका छन् तर धेरैले त्यसबारे बुझ्दैनन् । बुझ्ने पुस्ताले लागू गर्न सक्दैन वा त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्दैन । नयाँ पुस्ताले त्यसलाई कि त बुझ्दैन कि त गलत ढंगले बुझ्छ । यसकारण बीपीको समाजवादलाई चटक्कै छाडेर नेपाली कांग्रेस हिन्दू राज्यको नारा बोकेर हिँडेको छ । यसले कांग्रेसलाई कहाँ पु¥याउला त ?
राजालाई हिन्दूहरूले भगवान् विष्णुको अवतार मानेका छन् । त्यसैले, नेपालका शाह वंशका राजाहरूलाई नेपालमा मात्रै नभएर भारतमा पनि भगवानलाई जस्तै आसनमा राखेर पूजा गर्थे त्यहाँका हिन्दू अतिवादीहरू । राजसंस्था र हिन्दूत्व भनेको अविभाज्य हो भन्ने उनीहरूको दर्शन छ । हिजो २०६३ सालको आन्दोलनपछि गणतन्त्रमा जाने सवालमा नेपाली कांग्रेस सहमत नभएको सबैलाई विदितै छ । राजासहितको प्रजातन्त्रमा नै बस्न चाहेको थियो । तर, जनआन्दोलनले गणतन्त्रको नारा यसरी स्थापित गरेको थियो कि गणतन्त्रबाट पछि हटे जनआन्दोलन कांग्रेसलाई राजासँगै घाटमा सेलाउन तयार थियो । यही सत्यलाई बुझेर कांग्रेसले बाध्य भएर गणतन्त्र स्वीकार गरेको थियो । त्यसको बदलामा माओवादीलाई उसले संघीयता छाड्न लगाएको थियो । जसका कारण माओवादीले संघीयता छाडेको भन्ने भ्रम बाँडेर मधेस र जातीय अतिवादीहरूले केही वर्ष सडकमा अराजकता मच्चाइरहे । सुशील कोइराला त संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलासम्म पनि बेबी किङको पक्षमा थिए । कांग्रेसभित्रै युवापुस्ताका केही नेता गणतन्त्र पक्षधर भएका कारण उनलाई दबाब परेको थियो । उसो त आफ्नो पालामा संविधान घोषणा गर्ने अवसर पनि गुमाउन चाहँदैनथे उनी । यसरी राजाको पेलाइ र माओवादी जनयुद्धका कारण बाध्यताले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरेको कांग्रेस अहिले पार्टी संकटमा परेका बेला उही आफ्नो पुरानो चरित्रमा फर्केको छ । यसो गरे मात्रै अब पार्टी बचाउन सकिने उसको निष्कर्ष छ । यो उसको आत्मघाती कमद हो ।
अहिले बिनाप्रसंग हिन्दू राज्य माग गर्नु भनेको नेपालको सन्दर्भमा स्पष्ट राजावादी हुनु हो । यो वा त्यो बहानामा उनीहरू नेपालमा अझै राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ कि भनेर लागेका छन् । यसका लागि उनीहरू संयुक्त मोर्चा बनाएर ठूलो धनराशि खर्च गरेर विभिन्न अभियान चलाइरहेका देखिन्छ । उनीहरूको गतिविधिले यने प्रस्ट हुन्छ । उनीहरूले गाई, नेपालको झन्डा र राजाहरूको इतिहासलाई जनताको भावना बहकाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । अहिले नेपाली कांग्रेससमेत यो पंक्तिमा मिसिएको छ । कांग्रेस हिन्दू र राजावादीहरूको नेतृत्व गरेर राजा फर्काउने अभियानमा लागेको छ ।
विद्वान्हरूले भनेका छन्– क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति सँगसँगै अघि बढ्छन् । क्रान्तिकारी अलमलिए भने प्रतिक्रान्तिकारीहरू पुनरुत्थानवादीहरू हावी हुने कोसिस गर्छन् । यस्तो बेला क्रान्तिकारीहरू सचेत हुन नसके प्रतिक्रान्ति हुन्छ र परिवर्तनका उपलब्धिहरू गुम्छन्् । यो क्रान्तिका लागि मात्रै नभएर युग, मुलुक र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि समेत धेरै ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । बहुमतप्राप्त वामशक्ति सरकारको नेतृृत्वमा रहेका बेला नेपाली कांग्रेस आफ्नो संगठन सुधार र जनताको विश्वास जित्ने काममा लाग्नुको सट्टा परिवर्तनको घाँटी निमोठ्ने गतिविधिमा लागेको छ । यसले उसैलाई पनि हानि हुनेछ । कांग्रेसले अहिले आत्तिएर गलत कमद उठाउनु आवश्यक छैन । अहिले कांग्रेस जुन बाटो समाउन खोज्दै छ, त्यो उसैका लागि समेत आत्मघाती कदम हो । पार्टी सुदृढीकरणमा लाग्दै सरकारका कामकारबाहीमा वाचडगको भूमिका निर्वाह गरे आगामी चुनावमा जनताले वाम सरकारसँग आजित भएर उसलाई जिताइदिन पनि सक्छन् । यसकारण सरकार अलमलिएको बेलामा प्रतिपक्षी पनि अलमलिनु वा रुमलिनु दुर्भाग्य हो । सरकारले दरोसँग खुट्टा टेक्न आवश्यक छ, यसैगरी प्रतिपक्षले पनि खुट्टा कमाउन जरुरी छैन ।